WhatsApp amin'ny Mac, beta vaovao an'ny OS X EL Capitan, resadresaka nifanaovana tamin'i Tim Cook sy ny maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac | Avy amin'ny mac aho
WhatsApp amin'ny Mac, beta vaovao an'ny OS X EL Capitan, resadresaka nifanaovana tamin'i Tim Cook sy ny maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Jordi Gimenez | | Apple, Mac OS X, About us
Tsy isalasalana fa ity herinandro voalohan'ny volana Mey ity dia nahitam-bokatra tokoa teo amin'ny tontolon'ny Apple ary amin'ity famintinana fohy amin'ny Alahady ity dia hampiharihary mivantana ny sasany amin'ireo vaovao nasongadina tamin'ny hoe avy any Mac aho. Ny marina dia ny herinandro voalohany Mey Tsy izany no niavaka indrindra teo amin'ny lafiny vaovao, fa raha manana isika vaovao manandanja momba ny Mac sy ny tontolon'ny Apple amin'ny ankapobeny, ka andao hiroso amin'izany.
Ny vaovao voalohany dia misy ifandraisany amin'ny tontolon'ny fandefasan-kafatra sy ireo mpampiasa izay maniry ny hahatonga ny fampiharana be indrindra amin'ny fitaovana finday ho tonga amin'ny fomba ofisialy Mac. Eny, miresaka momba ny mety hisian'ny Tonga tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny OS X sy PC i WhatsApp, noho izany dia manomboka ny herinandro isika.
Ny vaovao manaraka izay hasongadinay dia fampianarana bebe kokoa noho ny vaovao ho azy. Ny fahalalana ny fomba azontsika atao ampidino ny extensions amin'ny Mac ary i Pedro Rodas mpiara-miasa amintsika dia milaza izany momba azy ao tutorial ity.
Ny fahatongavan'ireo kinova beta dia mitohy isan-kerinandro ary amin'ity tranga ity dia efa ananantsika misy na ho an'ny mpamorona na ho an'ireo mpampiasa izay ao amin'ny programa beta ho an'ny daholobe, ny OS X El Capitan beta fahefatra izay ahitantsika fanatsarana ny fampisehoana sy fanamboarana bibikely.
Ny fanadihadiana natao dia nilaza fa Ny Mac dia efa misolo tena ny 9,2% amin'ireo solosaina fampiasa indrindra eto amin'ny tranonkala. Tena zava-dehibe ity vaovao ity ary tsy tokony hihoarantsika ny fotoana hahafantarana bebe kokoa momba izany ny valiny azo ato amin'ity studio ity.
Farany fa tsy farany, avelantsika ny vaovao an'ny tafatafa niaraka tamin'ny CEO Apple Tim Cook, izay ilazany amintsika ny lohahevitra mifandraika amin'ny Apple Watch sy ny maro hafa Vaovao mifandraika amin'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » WhatsApp amin'ny Mac, beta vaovao an'ny OS X EL Capitan, resadresaka nifanaovana tamin'i Tim Cook sy ny maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Ahoana ny fitantanana ny fikandranao amin'ny OS X El Capitan sy Magnet
Apple dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa SAP vaovao